चीन सीएनसी मशीनिंग निर्माता र आपूर्तिकर्ता | मेस्टेक
कास्टिंग र स्ट्याम्पिंग डाई
सीएनसी मशीनिंग workpiece प्रक्रिया गर्न कम्प्युटरकृत संख्यात्मक नियन्त्रण सटीक मेशिन उपकरण प्रयोग गर्ने प्रविधि हो। प्रसंस्करणमा प्रयोग हुने मेसिन उपकरणहरूको प्रकारहरूमा सीएनसी खराद, सीएनसी मिलिंग मेशिन, सीएनसी बोरिंग र मिलिंग मेशिन, आदि शामिल छन्।
MESTECH धेरै उच्च प्रदर्शन CNC मशीनिंग उपकरण संग सुसज्जित छ, डिजाईन र मशीनिंग ईन्जिनियरहरूको एक उत्कृष्ट टोलीको साथ र कडा प्रक्रिया। हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई उच्च गुणवत्ताका उत्पादनहरू, समयमा वितरण र सेवाहरू प्रदान गर्न सम्मानित छौं।
मेसिनरी र उपकरण उद्योग आधुनिक उद्योगको आमा हो। उद्योग जसले निर्माण मेशीनरी र उपकरण लिन्छ म्यानिकल प्रोसेसिंग उद्योग हो। मेकानिकल प्रोसेसिंगको टेक्निकल स्तरले मेशिनरी र उपकरणहरूको गुणस्तरको स्तर निर्धारण गर्दछ।
प्रेसिजन मशीनिंग भनेको के हो?
मशीनिंग workpiece बाट आवश्यक आकार र आकार प्राप्त गर्न सामग्री हटाउने निर्माण प्रक्रिया हो। मेकानिकल प्रोसेसिंगका लागि प्रयोग गरिने मेशिनहरूलाई मेसिन उपकरणहरू भनिन्छ। मशिन्ड भागहरूका लागि सामग्रीहरूमा इस्पात, अलौह धातुहरू र अन्य आकारहरू र शक्ति-स्थिर धातुहरू, साथै ठोस प्लास्टिक र काठ उत्पादनहरू सामेल छन्। मशीनिंगले उच्च सटीक भागहरू प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसैले हामी यसलाई सटीक मेशिनिंग भन्छौं। यो बिभिन्न मेसिन पार्ट्स निर्माणका लागि मुख्य प्रक्रिया विधि हो।
कम्प्युटर टेक्नोलोजीको विकासको साथ, औद्योगिक डिजिटल नियन्त्रण टेक्नोलोजी मेशिन उपकरण उपकरणमा देखा पर्दछ, जसले मेशिन उपकरणको कामको डिजिटलाइजेशन र स्वचालनलाई महसुस गर्दछ र उत्पादन क्षमता र प्रसंस्करण सटीकतामा धेरै सुधार गर्दछ। यस प्रकारको टेक्नोलोजी जसले मेसिन उपकरण प्रसंस्करण सञ्चालन गर्नको लागि कम्प्युटर प्रणाली प्रयोग गर्दछ संख्यात्मक नियन्त्रण प्रसंस्करण टेक्नोलोजी भनिन्छ। मेशिन उपकरण जसले कम्प्युटर अपरेटिंग सिस्टम प्रयोग गर्दछ संख्यात्मक नियन्त्रण मेसिन उपकरण (CNC मेशिन) हो।
CNC मशीनिंग भनेको के हो?
सीएनसी मशीनिंग (सटीक मेशिन) एक निर्माण प्रक्रिया हो। मेसिन उपकरणहरू कम्प्युटर प्रोग्रामहरूको नियन्त्रणमा चल्दछन्। कम्प्युटर प्रोग्रामहरू कोडर सार्न कोड हुन्छन् सटीक मेशिन भागहरू उत्पन्न गर्न कोडेड प्रोग्रामको आकार मिल्दछ (G कोड भनिन्छ)।
सीएनसी मशीनिंग एक विनिर्माण प्रक्रिया हो जसमा पूर्व प्रोग्राम प्रोग्राम कम्प्युटर सफ्टवेयरले प्लान्ट उपकरण र मेसिनरीको आन्दोलनलाई संकेत गर्दछ। यो प्रक्रिया जटिल मेसिनरीको श्रृंखला नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, grinders र खरादबाट मिलिंग मेशिन र राउटरहरू। एनसी मसि machको माध्यमबाट, तीन आयामिक काट्ने कार्यहरू प्रम्प्टहरूको सेटमा पूरा गर्न सकिन्छ।
सामान्यतया, क्याम (कम्प्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग) सफ्टवेयर मेशीन शपमा स्वचालित रूपमा सीएडी (कम्प्युटर एडेड डिजाइन) फाइलहरू पढ्न र सीएनसी मेशिन उपकरणहरू नियन्त्रण गर्न जी कोड प्रोग्राम उत्पन्न गर्न प्रयोग गरिन्छ।
सीएनसी मशीनिंग मेशिन उपकरण के हो?
सीएनसी मेशिन उपकरण एक मेसिन उपकरण हो जुन सामान्य मेसिन उपकरण र कम्प्युटर प्रणालीलाई एकीकृत गर्दछ।
नियन्त्रण गरिएको मेशिन उपकरणहरूमा ग्राइन्डर, मिलिंग मेशिन, ल्याथस, ड्रिल र प्लानरहरू सामेल छन्।
CNC खराद प्रशोधनको प्रक्रियामा, CNC प्रशोधन मार्गको निर्धारणले सामान्यतया निम्न सिद्धान्तहरू अनुसरण गर्दछ:
(१) वर्कपीसको प्रशोधन हुनको लागि शुद्धता र सतह मोटाई ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ।
(२) प्रशोधन मार्ग छोटो बनाउनुहोस्, खाली यात्रा समय घटाउनुहोस् र प्रशोधन क्षमता सुधार गर्नुहोस्।
()) सकेसम्म संख्यात्मक गणनाको कामको बोझ सरल र प्रशोधन प्रक्रिया सरल बनाउनुहोस्।
()) केहि पुन: प्रयोग योग्य प्रोग्रामहरूका लागि सबरुटिनहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ।
CNC मेसिन उपकरणहरूको प्रकार:
१.CNC मिलिंग मेशिनहरू
२.CNC मशीनिंग केन्द्र।
E. इलेक्ट्रीकल डिस्चार्ज सीएनसी मेशिनहरू।
C.CNC तार काट्ने मेसिन
6.CNC प्रेसिजन ग्राइन्डिंग मशीन
इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज सीएनसी मेशीन
सीएनसी वायर काटने मशीन
सीएनसी मशीनिंगको सुविधा
सीएनसी मेशिनले परम्परागत मेकानिकल उपकरणहरूको म्यानुअल अपरेशनको विराम हटाउँछ। योसँग उच्च क्षमता, स्थिर गुणस्तर, सटीक आकार र स्वचालन छ। यो उच्च सटीक र उच्च गुणवत्ता उत्पादनको लागि धेरै उपयुक्त छ। सीएनसी मशीनिंग सटीक पुर्जाहरूको निर्माणको अनुभूति गर्न आवश्यक तरिका हो।
CNC मशीनिंग को आवेदन
१. फिक्स्चर र उपकरणहरूको संख्या घटाउनुहोस्, र जटिल आकारका भागहरू प्रशोधन गर्न जटिल फिक्स्चर उपकरणको आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईं भागहरूको आकार र आकार परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले केवल भागहरू प्रशोधन प्रक्रियाहरू परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, जुन नयाँ उत्पादनहरूको विकास र परिमार्जनका लागि उपयुक्त छ।
२. सीएनसी प्रसंस्करण गुणवत्ता स्थिर छ, प्रसंस्करण प्रेसिजन उच्च छ, पुनरावृत्ति प्रेसिजन उच्च छ, र यसले विमानको प्रशोधन आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ।
Multi. बहु-विविधता र साना ब्याच उत्पादनको सम्बन्धमा उत्पादन दक्षता उच्च छ, जसले उत्पादन तयारीको समय, मेशीन उपकरण समायोजन र प्रक्रिया निरीक्षण घटाउन सक्छ, र उत्तम कटिंग मात्राको प्रयोगको कारण कटिंग समयलाई कम गर्दछ। ।
Mach. मशीनेबल जटिल प्रोफाइलहरू जुन परम्परागत विधिहरू द्वारा मशीनि to गर्न गाह्रो हुन्छ, र अवलोकन गर्न नसकिने केही अंशहरू प्रक्रिया गर्न सक्दछन्। सारांशमा, यो जटिल संरचना र साना ब्याच उत्पादनहरू जस्तै सटीक धुरा, अप्टिकल फाइबर टेल शेन्क्स, पिन र यस्तै प्रकारका सटीक भागहरू हुन् जुन अधिक उपयुक्त छन्।
मेस्टेक कम्पनीले ग्राहकहरूलाई विभिन्न प्रकारका धातु, प्लास्टिकको भागहरूको सटीक मेशिन सेवाहरू प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं अधिक जानकारी चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
अघिल्लो: कास्टिंग भागहरू मर्नुहोस्
अर्को: मेशीन भागहरू
सीएनसी मेशीन सेन्टर
सीएनसी मेशिन सेवाहरु
सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेन्टर
धातु मुद्रांकन मोल्डहरू